Shoko RaMwari Rinofanira Kugara Riri PaMuromo Wako
China, 16 Gunyana 2021
"Ruvimbo ndirwo runotizivisa. Kuti Shoko raMwari ndiro rakashandiswa kuronga zvinhu zviya. Zvakaitika panyika pano. Kureva kuti zvinhu zvatinovona nemeso enyama. Zvakaitwa nezvinhu zvisingavonekwi nemeso enyama"(Vahebheru 11 ndima 3).
Mundima iyi mune mashoko matatu. Mashoko aya akakosha zvikuru. Rimwe nderinoti kuronga. Rimwe nderinoti Shoko. Rimwe nderinoti nyika. Mashoko aya anoturikirwa kubva kumashoko eChigiriki. Rekuti " kuronga" rinoturikirwa kubva kune rinoti, "kartatizo". Shoko iri rinoreva kugadziridza. Rinorevavo kuvakurudza. Rekuti " nyika" rinobva pane rinoti " aion". Shoko iri rinoreva mafambiro ehupenyu. Rinotaura pamusoro pehupenyu hwemunhu panyika pano.
Rekuti "Shoko" rinobva pane rinoti, "rhema". Shoko iri rinoreva shoko. Asi iri rinenge riri shoko rataurwa kumunhu. Ishoko rinenge rakananga munhu uyu. Riri shoko rake renguva iyoyo. Richimubatsira pane chimwe chinhu. Kureva kuti ndima iyi iri kutaura pamusoro pehupenyu hwevanhu panyika. Hupenyu uhu hwakaita zvekurongwa. Hwakarongwa neShoko raMwari. Shoko iri raiita zvekutaurwa.
Asi Shoko iri harisi rinotaurwa naMwari pachavo. Ishoko ravanoisa mumoyo wemunhu. Munhu uyu obva aritaura. Saka Mwari havasi ivo vakanga vari kutaura Shoko iri. Kureva kuti havasi ivo vakanga vari kurongedza nyika. Vanhu ndivo vakanga vari kutaura Shoko iri. Vachirongedza nyika. Vachironga voga hupenyu hwavo.
Ndizvo zvaunofaniravo kuita iwe. Mwari vanoisa Shoko ravo mumoyo mako. Unofanira kushandisa Shoko iri. Ritaure. Ndiko kuti hupenyu hwako hunake. Ndiko kuti hupenyu hwako hufadze. Hupenyu hwako hwakamira sei nhasi? Unoda kugara nyasha dzichiwanda muhupenyu hwako here? Unoda kuwedzera kufanana naMwari here? Unoda kutonga zvinhu zvenyika ino here? Shandisa muromo wako.
Hupenyu hwako hunogona kunge husina kumira zvakanaka. Izvozvo hazvina basa. Unogona kugadzirisa hupenyu uhu. Hupenyu hwako hunogona kunge hwakaparadzwa. Hunogona kunge hwakanyangara. Izvozvo hazvina basa. Unogona kuhugadzirisa. Unogona kuhuvakurudza. Ungava wakatarisana nenjodzi. Unogona kudzimura njodzi iyi. Satani anogona kunge ari kutsvaka kuparadza hupenyu hwako. Kana mhuri yako. Kana guta rako. Kana nyika yako. Kana hupenyu hwehama dzako dzepedo. Unogona kumurambidza. Unogona kumisa mabasa ake aya. Mumweya mako mune Shoko raMwari. Taura Shoko iri. Ritaure nemuromo wako.
Saka shandisa Shoko raMwari. Gara uchiritaura nemuromo wako. Rishandise kudzingira muvengi kure. Rishandise kuronga hupenyu hwako. Ita kuti hupenyu hwako hufambe negwara rawakarongerwa naMwari. Hareruya!
Baba vekudenga vandinoda. Ndinokutendai. Hupenyu hwangu huri kufamba negwara ramakandirongera. Ndinogara ndichikurira muvengi. Ndinogara ndichikurira zvinonetsa muhupenyu. Shoko renyu rinogara riri pamuromo pangu. Ndiro rinondikundisa kudai. Ndinotonga zvinhu zvenyika ino. Muzita raJesu. Ameni.
Mariko 11 ndima 23